Sweden oo markale Soomaali ka soo qaadaysa xeryaha qaxootiga | Somaliska
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa markale shaacisay tirada qaxootiga ay Sweden sanadkaan ka soo qaadayso xeryaha qaxootiga kuwaasoo dib u dejin loo samaynayo. Dadka xeryaha laga soo qaadayo oo sanadkaan inta badan ay yihiin Syrian ayaa waxaa ku jira Soomaali laga soo qaadi doono xeryaha qaxootiga ee ku yaala bariga Afrika qaasatan kuwa Kenya sida Dhadhaab.
Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in ay muhiimada siinayaan Syrianka maadaama wadankooda uu ka socdo dagaal balse waxay sidoo kale soo qaadi doonaan Soomaali, Ereteriyaan, iyo dad kale. Guud ahaan waxaa dib u dejin loo samayn doonaa 1900 qof. Baarlamaanka Sweden ayaa go’aamiya tirada qaxootiga dib u dejinta loo samaynayo, kuwaasoo ka dheeri ah dadka Sweden iska dhiibaya oo hada ku dhow 100 000 qof.
Dib u dejinta qaxootiga ayay sheegeen in ay ku socoto si gaabis ah taasoo ay sabab u tahay guryo la’aan ka jidha Sweden maadaama ay aad wadanka ugu soo bateen magangalyo doonka iskood u soo galaya wadanka. Sweden ayaa sanadkii hore waxay dib u dejin u samaysay Soomaali gaaraysa 150 qof.
Sweden oo aqoonsatay guurka gabar 14 sano jir ah, hadana ka laabatay
Ok lkn waxaa iga su’al ah Jimcale bro dadka hada joga Sweden oo didmada hesta maxaa lagadhahay waxan karajeynaa jawab diran mahasanid
Walaal midayn ti reeraha maxad war kahaysan goor me bay dhaqangali donta
Mohamed iyo Amina wax cusub oo arimahaas ku saabsan ma jiraan, sida aad la socotaan Sweden mar hore ayay bedashay aragtideeda ku aadan xaalada Somalia sidaa darteed lama xiisaynayo Soomaalida hada. Waxaa soo baxay dad kale oo ka dhibaato badan sida Syria. marka hada cid xitaa soomaalida u doodaysa ma jidho.
Walaal mahad sanid
Jimcaale mid baan kuwaydiinayaa iyo walaalahayga kawar haya hadii soomaalidii diidmada haysato ay saas ubadantahay maxaa xala oo lasamaynaa hadaanba loosoo jeedin in loodoodo oo wax loo qabto seeselayeelaa 3sano baan marowna maxaa loo waayay intaas oo soomaaliya baa wadankaan dagan aadna ubadan maa loo kaco oo dadkaan loo mudaaharaado wadankaan waanku dhibanahay sharcila aanta illaahay hanagasaaro